R W Cabdi Weli oo Birmingham kula kulmaya qeyb ka mid ah jaaliyadda Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 16 September 2014
Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha dalka iyo wefdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain ayaa ku wajahan magaalada Birmingham halkaasi oo Jaaliyadda Soomaaliyed ay xaflad soo dhaweyn ah ugu sameynayaan wafdiga Ra’iisul wasaaraha.
Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo wafdiga uu hogaaminayo oo ay kamid yihiin Wasiirka Gaashaandhigga, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, Wasiirka Warfaafinta Mustaf Sheekh Cali dhuxulow, Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi “Indho-qarshe” iyo xubno kale.
Cabdiweli Sheekh iyo xubnaha la socda ayaa la filayaa in kulanka ay Jaaliyadda soo qaban qaabiyeen ka jeediyaan qubado ay kaga hadlayaan horumarka dalka iyo doorka Jaaliyadda uga aadan ka qeyb qaadashada dib u dhiska dalka.
Ra’iiusl Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa markii ay ka soo laabtaan magaalada Birmingham, waxa ay London kaga qeyb geli doonaan shir looga hadlayo ammaanka iyo xoojinta ciidanka Soomaaliyeed, kaasi oo ay ka wada hadli doonaan Madaxda Wasaarada Difaaca u qaabilsan dalka Britain.
R/wasaare C/weli iyo wafdigiisa ayaa intaasi kaddib la kulmi doona qaar kamid ah madaxda dalka Britain.